Ungawulalela kanjani umculo kumawashi ahlakaniphile (i-Android, i-Apple namanye) 🥇 i-Emulator.online ▷ 🥇
Lapho uthatha isinqumo sokuthenga i-smartwatch, kufanele futhi uyihlolisise ukusebenza ngokuya ngokudlala komculo- Ingabe izosebenza kuphela njengohlobo lwesilawuli kude se-smartphone yakho noma izokwazi ngempela sakaza umculo futhi uvumelanise izingoma ukuze uzilalele noma yikuphi?
Ngayo izicelo eziningi ezahlukene zomculo namapulatifomu okusakaza atholakala emakethe, impendulo yalo mbuzo ingahle ibe lula kunalokho ongase ucabange, ikakhulukazi ngoba akunakwenzeka ukusebenzisa insiza yomculo ekhethiwe nge-hardware efakwe ku-smartwatch. Sizobona, phakathi kokunye, ezigabeni ezilandelayo ukuthi, empeleni, ukusekelwa okungcono kakhulu kokudlala komculo okungaxhunyiwe ku-inthanethi akuveli kumawashi ahlakaniphile akhiwe yi-Apple neGoogle.
Nakhu konke odinga ukukwazi ikhono lamawashi ahlakaniphile wokudlala umculo kokubili kusuka efonini yakho futhi ngokuzimela.
FUNDA NONKE: Ama-smartwatches amahle kakhulu: i-Android, i-Apple nabanye
Njengomholi wemakethe kuma-smartwatches, akumangazi ukuthi i-Iwashi le-Apple nikeza umsebenzisi izinketho eziningi zokulalela umculo nezinye izinhlobo zomsindo; I-Apple Music Eqinisweni, inketho esobala kunazo zonke: uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulawule umculo odlalwa efonini yakho ngqo kusuka esihlakaleni sakho noma usakaze izingoma ngqo kwi-Apple Watch ngokulalela ngama-headphone. Bluetooth.
Ngokubhalisela i-Apple Music, ungayisakaza yonke ingoma ekhathalogu noma uzwe konke okuthengwe ngamadijithi kungeniswe ku-smartwatch.
Uma izinsizakalo zihambisana newashi elikhethiwe, amathrekhi omculo angasakazwa ngqo kwi-Apple Watch nge I-Wifi O I-LTE; Futhi, uma ukude nokuxhumeka kwe-inthanethi futhi ufuna ukushiya ifoni yakho ekhaya, ungavumelanisa izingoma ku-Apple Watch ngaphambi kokuya ku Iwashi lami okwamanje kuhlelo lokusebenza lwe-Apple Watch ku-smartphone yakho, bese ungena umculo mi Ngeza umculo. Ukuvumelanisa kuzosebenza kuphela ngenkathi i-Iwashi le-Apple uphethe.
futhi Spotify unohlelo lokusebenza oluzinikele lwe-Iwashi le-Apple engasetshenziswa ukusakaza amathrekhi omculo ngqo esihlakaleni sakho noma ukulawula ukudlala kwenye idivayisi. Futhi, ngenxa yokuvuselelwa kwakamuva, manje isebenza kumadivayisi eselula naku-Wi-Fi, ekuvumela ukuthi uphume ngaphandle kwefoni yakho.
Kodwa-ke, umthombo wokuxhumeka kwedatha yewashi uyadingeka futhi kusenzima ukuvumelanisa uhlu lwadlalwayo newashi ukuze ulalele ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Bese kuba khona uhlelo lokusebenza, Umculo we-YouTube, enikezelwe ku-Apple Watch, kodwa isetshenziselwa ukuhlola ilabhulali yakho yomculo kuphela nokulawula ukudlala kwamanye amadivayisi. Imisebenzi efanayo ingatholakala kuhlelo lokusebenza Deezer ngu-Apple Watc.
Isistimu yokusebenza ye-Google Wear
Ingxenyekazi ye-smartwatch ye- -Google kusamele usebenzise ukwesekwa okugcwele kokuvumelanisa kwe- Umculo we-YouTube lokho, kucatshangelwa iqiniso lokuthi I-Google Play Umculo isusiwe, kuyamangaza kakhulu. Noma kunjalo, kungenzeka ukusebenzisa Sebenzisa i-OS ukulawula imisebenzi eyisisekelo ye- Umculo we-YouTube ku-smartphone yakho.
Lokhu okungenhla kusebenza cishe kuzo zonke izinsizakalo zomculo - alukho uhlelo lokusebenza Sebenzisa i-OS ezinikele kumasevisi ahlinzekwa ngokwesibonelo we-Apple Watch, ngakho-ke akukho ukuvumelanisa kohlu lwadlalwayo
Izilawuli zokudlala zizovela ku-smartwatch sakho isikhathi ngasinye lapho idivayisi Android idlala okuqukethwe kwe-multimedia ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza nangesidlali se-podcast, kepha ngaphandle kokuqala nokumisa ukudlala, akukho okuningi ongakwenza futhi kusazodingeka ukuphatha i-smartphone yakho njalo.
Isevisi yomculo kuphela enohlelo lokusebenza oluhambisana nayo Sebenzisa i-OS es Spotify Yize inganikeli ngezici eziningi ngaphandle kwalokhu okuthola ngokuhlanganiswa okujwayelekile kwe- Android con Sebenzisa i-OS: Ungangeza izingoma kulabhulali yakho yomculo kusuka ewashini lakho futhi ushintshe phakathi kwamadivayisi wokudlala, kepha awukwazi ukusakaza umculo ngqo ewashini lakho, futhi awukwazi ukuvumelanisa amathrekhi okulalela ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ukudlala izingoma kwiwashi elihlakaniphile Sebenzisa i-OS ngaphandle kokudinga ucingo, iInketho engcono uhlelo lokusebenza NavMusic enikezela nge isikhathi sesivivinyo samahhala ngemuva kwalokho ukhokha: uhlelo lokusebenza oluncane olususelwa ekudlulisweni kwamafayela endawo kuwashi lakho, ngaleyo ndlela uthole umculo owuthandayo ngefomethi yedijithali.
UFitbit, uSamsung noGarmin
Ibha ngayinye ye Fitbit su I-Versa Lite ikuvumela ukulawula umculo ngenkathi uwudlala ku-smartphone exhunywe kuwo, ngokusebenzisa yisiphi isicelo khetha ukusebenzisa. Kumawashi ngaphandle kweVersa Lite neSense entsha neVersa 3, okuqondiswe kakhulu kumasevisi wefu, ungavumelanisa amathrekhi edijithali atholwe ngedivayisi yakho ngohlelo I-Fitbit Xhuma.
Futhi kulokhu Spotify nikezela uhlelo lokusebenza olukhethekile kumawashi ahlakaniphile Fitbit, kodwa futhi futhi ikuvumela kuphela ukulawula ukudlala kwamanye amadivayisi: empeleni, akunakwenzeka ukuvumelanisa uhlu lwadlalwayo newashi. Izinhlelo zokusebenza ezikuvumela ukuthi wenze lokhu, kunoma iyiphi idivayisi. ngaphandle kweVersa Lite, Nginguye Deezer mi Pandora. Ufuna-ke ukulalela umculo wakhe ku Fitbit Ngaphandle kokuthi ifoni yakho ikusize, kufanele usebenzise enye yalezo zinsizakalo zokusakaza noma ukopishe amafayela womculo wedijithali, njengoba kuchaziwe ngenhla.
Mayelana nochungechunge I-Samsung Galaxy Watch, ukuqala uhlelo umculo qaphela ukuthi kungenzeka ukuthi ushintshe kusuka ekulawuleni ukudlala umculo ocingweni uye kwewashi uqobo: ukulalela umculo ungaxhunyiwe ku-inthanethi, ungavumelanisa amathrekhi edijithali kuwashi elihlakaniphile noma wenze kusebenze uhlelo lokusebenza Spotify ezinikele futhi enguqulweni Okokuqala ikuvumela ukuthi uvumelanise uhlu lwadlalwayo ku-smart watch.
Ekugcineni, anhlobonhlobo amawashi smart Garmin inezinketho zokudlala umculo ezifana nalezo SamsungUngawasebenzisa lawa mawashi ukulawula ukudlala kusuka kuzinhlelo eziningi zomculo efonini yakho noma ukudlala umculo we-digital ovumelanisiwe ngekhompyutha yakho nge I-Garmin Connect, ikuvumela ukuthi ushiye ifoni yakho ekhaya.
Okuwukuphela kwensiza yomculo ehambisana nokusetshenziswa komdabu kokugqokiwe okufanayo Spotify futhi, njengakumadivayisi Samsung, ababhalisile ku- Spotify Premium bangavumelanisa uhlu lwadlalwayo kudivayisi yeGarmin ukuze ubalalele noma kuphi.
FUNDA NONKE: Iyiphi i-smartwatch ongayithenga ngo-2021